Maamulka dhulku sidee ahaan doonaa mustaqbalka? - Aragtida Cadastre 2034 - Geofumadas
Maamulka dhulku sidee ahaan doonaa mustaqbalka? - aragtida Cadastre 2034
Mee, 2017 cadastre, egeomates My
Soo jeedinta sida uu u ekaan karo maamulka dhulka 2034 uma muuqato fikrad fudud, haddii aan aragno inta isbeddel ee dhacay 20-kii sano ee la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, layligu waa isku day labaad oo ah waxa la qabtay 20 sano ka hor Cadastre 2014. Bixinta fiiro yar ee hadaladan waxaa laga yaabaa inay ku kacdo qof, hay'ad ama xitaa qaran dhan.
In laga fikiro in sanadka 2034 ay cadastre diyaarin doonaan oo ay cusbooneysiin doonaan muwaadiniinta si iskood ah ugu shaqeeya waxay u muuqataa mid edeb darro ah. Laakiin taasi waa sida ay u cusbooneysiisay kaartuunka ka hor intaanan ogaan Khariidadda OpenStreet, taas oo su'aal gelineysa in machad sawir gacmeed ay jirto ama haddii aan u adeegsanno kheyraadkan si aan ugu dhiirrigelinno khariidaynta iskaashi ee ardayda oo aan kaliya nafteena u qaadno tallaabooyinka caadiga ah, iyo Cusbooneysiinta gelitaanka gundhigga lama huraanka ah sida qaab jaangooyo isdaba joog ah iyo sawirro dayax gacmeed si joogto ah loo cusbooneysiiyo.
Aragtiyada Cadastre ee mustaqbalka sanadaha 20
Isbedelada fikradeed ee Cadastre waxay u muuqdaan kuwo aad u dhib badan, maaddaama isticmaalkeedu ka adag yahay kaartarka miisaanka kale. Xiriirinta ay la leedahay dhinacyada sharciga, maaliyadeed, iyo dhaqaalaha waxay abuureysaa isku-tiirsanaan keliya xagga macluumaadka laakiin sidoo kale geeddi-socodka. Si kastaba ha noqotee, sida sawir qaadida waxaa laga yaabaa in ay dhimato xiligii ugu fiicnaa ee ammaantaMaaddaama tikniyoolajiyaddu tahay mid dimoqraadi ah oo dalabyada macluumaadka waqtiga-dhabta ah la abuurayo, qallafsanaanta saxda, saxeexa xirfadlaha iyo socodka habka ayaa halis u ah in aan la fulinin shuruudaha dalab aan laga noqosho lahayn. Tusaale ahaan, aan dib u eegno intee encyclopedias ah oo aan dhowaan u iibsannay carruurteenna oo ay u adeegsanayaan shaqooyinkooda maalinlaha ah; o Imisa arday ayaa ku harta maktabada iskuulka si ay u soo gabagabeeyaan shaqooyinkooda; In kasta oo ay jiraan su'aalo cilmiyeed ay wikipedia leedahay, isticmaalkeeda, cusbooneysiinta wadashaqeynta iyo iswaafajinta mashiinka raadinta Google, waxay u direysaa maktabadaha oo dhan matxafyada.
Arrin kale oo ah in laga fiirsado arrinta cadastre waa xaqiiqda ah in xaaladaha macnaha guud ee u dhexeeya waddammadu aysan u sinnayn xagga mudnaanta. Wadamada Yurub ee horeyba uhelay 100% caymis salka hantidooda heer qaran iyo shaqooyinka madaniga ah ee caadiga ah, tusaalooyinka sedex iyo afar cabbir waa mid deg deg ah. Xaaladda gebi ahaanba ka soo horjeedda ee dalalkooda kuwaas oo 2D caymiskoodu aanu weli dhammaystirnayn, fikirka oo dhammaystiran ayaa ah mid duugoobay oo ka sarreeya dhammaan meesha isbeddelada siyaasadeed ay horseedi karaan in la eryo koox dhan xirfadlayaal khibrad u leh, yaa waayi kara xirfad-yaqaanka isagoo ka qaadaya macluumaad ku saabsan dariiqyada adag iyo -Taasi ma keenayso inaan qoslo- inaad ka qaybqaato dabka xafiiska duqa magaalada oo ay ka mid yihiin danaha kale ee doonaya inay tirtiraan raadadka musuqmaasuqa.
Aragtida diiwaanka dhulka 20 sano ee mustaqbalka kama dhigeyso inay tahay sharad ku saleysan cabal ama habab ka dhan ah waxa jira. Saas ma aha, waa jimicsi ku saleysan dareenka guud ee dhaqammada wanaagsan ee horayba loo adeegsaday iyo u janjeeraha ay khabiiradu ku ogaadaan waddooyinka aan dib loo laaban karin. Laakiin waa inaannaan meesha ka saarin in isbeddellada la soo jeediyey ay horseedi karaan qaadashada dariiqooyinka; sida ku dhacda xaalado badan oo Afrika ku yaal oo ay muwaadiniintu ka baxeen iyagoo aan ogayn taleefanka siligga ah illaa jiilka dambe ee taleefanka gacanta. Taasi waa sababta ay moodooyinka u jecel yihiin 'Cadastre' ku habboon ujeedada waxaa lagu soo daray hadalada wacdinta rabshadda leh ee arintan; dalabka jira ee malaayiin guryood oo ay tahay in cinwaan looga dhigo iyo aqbalaadda muwaadin buurta ka doorbida cinwaan leh «badan ama ka yar saxLaakiin markay jiraan xuduudo la dejiyey derisyadooda; halkii aynan haysan waxna ka filayaan siyaasad kale inuu siiyo mar kale wax palpable.
Hadal qoraal ah oo loogu talagalay sanadaha 20 ee gacmaha nacasta - aragti ahaan u sameeyn kara a Nidaamka Qaranka ee Maareynta Hantida, u furan la tashiga dadweynaha, fikradaha xuquuqda, xannibaadaha iyo mas'uuliyadaha ka hor intaan loo arkin in loo arko heer; -Waxaa waalan- oo leh awooda u doodista sharciyeynta iyo xoog ku muquuninta qaar waxay awood u leedahay inay tirtirto qaababka caadiga ah haddii aysan damaanad qaadin waxtarka waqtiga, kharashyada, raadinta iyo daahfurnaanta. Waqtiga taageerayaasha hababka caadiga ay fursad u leeyihiin inay ka jawaabaan, waxay u rogi doontaa xayeysiinta rasmiga ah (shahaadada dhaqanka iyo xorriyadda) koontada hubinta guryaha sida marinka ay hadda bixiyaan bangiyada, waxayna ku fikireysaa inay ka baxdo jidka. dhexdhexaadiyeyaasha macaamilka iyada oo loo marayo daaqadda Ali-express si loo raadsado waqtiga dhabta ah.
Laakiin hey, inta aad waalan aqoonsado kuwa wadanka aad, waxaan si wixii la yidhi cutubka ugu horreeya ee qoraal soo celi, in hadalada Cadastral 2034 Waa sanadkii labaad waxa uu ahaa Cadastral 2014, kaas oo doonaya in ay hadalka bilaabin.
Ka hor Kadib 2014
Cadastre waa mid cusub, marka la barbar dhigo Diiwaanka hantida, kaas oo ku saleysan qawaaniinta la isku halleeyay qarniyo badan iyada oo ku saleysan mabaadi'da diiwaangelinta ee ka badalaya sharciga dhabta ah, la guuray, ganacsiga ama sharciga khuseeya. Ujeedooyinka caddaynka ah ee caddaymaha ayaa yimid waqti dambe oo isbeddel ku yimid habdhaqanka habdhaqanka si macnaha dhulka loogu talagalay bini-aadannimada: xeeladaha, dagaallada, qaddarinta, warshadeynta, kombiyuutarada; Intaa waxaa dheer, hirarka koritaanka dhaqaalaha ayaa keenay farsamooyinka maaraynta macluumaadka iyo horumarinta qalliinka galay dareemo nagu soo galay sidii nalagalagnimo.
Cilmi-baaristu waxay soo koobaysaa isbeddellada weyn ee ay Caadi ahaantu ku dhacday, waqtiyo kala duwan:
Muuqaalka qiimaha iyo canshuurta dhulka, iyadoo leh mudnaanta dhulka hanti dhaxal u ah feudalism. Layaab ma leh in qaabkani muddo dheer ku sii jiray Latin America, iyada oo la tixgelinayo in xitaa ka dib markii ay xorriyadda waddamadan ka qaateen Isbaanishka, qaabka dhaqaale uu sii waday inuu noqdo la qabsashada feudalism ee la yimid gumeysiga. Infographic-ka tani waa qaybtii ugu horreysay ee xujada, cadastre-ka maaliyadeed oo ah dalab aasaasi ah.
Barxada suuqa, leh isbeddel raaxo leh oo ah macnaha dhulka. Tani waxay la timid kacaankii warshadaha intii u dhaxeysay 1800 iyo 1950. Qaar badan oo ka mid ah aasaaska caadiga ah ee dhulka ayaa sii wadaya inay ku saleysnaadaan muuqaalka suuqa dhulka, sidaa darteed gabalkii waqtigaas la bixiyay wuxuu ahaa cadastre sharci ah oo ah codsi dhameystiraya dhinaca maaliyadda.
Maareynta dhulka maamulka, oo leh aragti dhul oo ah kheyraad. Tani waxay ku timid aragtiyaha cusub ee dib-u-dhiska dagaalka kadib, markii ay hay'ado badan oo dawladeed ay lahaayeen dib-u-habeyn xiiso leh, oo ay ku jiraan Cadastre iyo Diiwaanka. Kuwani waxay ahaayeen sannado muhiim u ahaa Diiwaan-ku-saleysan Buugga, oo u guuray warbaahinta sida microfilming, iyo arrinta Cadastre, saameynta kheyraadka caalamiga ah waxay taageertay casriyeynta farsamooyinka cadastral, gaar ahaan danaha amniga qaranka ee la xiriira dagaalka qabow. Natiija ahaan, qaybta cadastre ee dhaqaalaha ayaa casriyeynaysa habab qiimeyn oo u dhexeeya moodellada la fududeeyay ee ku saabsan xaaladaha Anglo-Saxon illaa moodooyinka adag ee ku saleysan qiimaha beddelaadda iyo qallooca qiimaha waxay sii wadaan ilaa maalmahaas wadamo badan oo Latin America ah.
Barashada horumarka waara, iyadoo dhulku yahay kheyraad guud oo kooban. Tani waxay ku dhalatay kacaankii macluumaadka, bilawgii 80-meeyadii, halkaas oo suurtagalnimada aaladaha dhijitaalka ah lagu beddeli karo khariidada iyo feylka dijitaalka ah, iyadoo loo malaynayo la-tashiyo iyo xiriir la yeelanaya dhinacyada kale ee danaynaya macluumaadka cadastral. Si la mid ah, xiisaha isdhexgalka Cadastre iyo Diiwaangelinta oo ka baxsan wada shaqeynta iyo isdhaafsiga xogta, fududeeynta muwaaddinka iyada oo loo marayo isdhexgalka howlaha. Tan ugu dambaysay waxay ka dhacday qalloocnaan baahsan oo ahayd in lagu soo uruuriyo wax walba oo xaashiyo xajmi xajmiisu ka kooban yahay «deynta»Fikradaha ah in la dhex dhigo xadhig u dhexeeya Cadastre iyo Diiwaanka si ay isugu xirmaan. Fahmitaanka in ujeeddooyinka badani ay ku jiraan muhiimadda silsiladda qiimaha maamulka dhulka oo aan ku jirin wajiga qabashada waxay ahayd mid xanuun badan ilaa maanta; taasi oo waxyeelo u gaysata muwaadinka rajaynaya in adeegyo fiican la helo.
Diiwaanka Dhulka 2014
Xaaladdan ugu dambeysa, Cadastre 2014 wuxuu dhashay bartamihii sagaashameeyadii, Xiriirka Caalamiga ah ee Joometristayaasha (FIG) wuxuu sameeyay mid ka mid ah sharadkeedii ugu fiicnaa si uu u soo nooleeyo kaalintiisa, isagoo taageeraya hindisaha tixgeliyay sida ay tahay inay Cadastre u noqoto 20-ka sano ee soo socota. Tani waxay noo horseedaysaa inaan tixgelinno dhaqammadii iyo qaababkii ugu wanaagsanaa ee laga adeegsan jiray adduunka, maamulka dhulka; iyadoo la saadaalinayo sida Cadastre u noqon karo 2014.
Tan waxaa ka muuqday dukumiinti leh aasaas falsafadeed oo inbadan oo maanta u muuqan kara wax iska cad, sikastaba waxaan kahadleynaa 1994, waqtiga uu bilaabmay hindisihiina la daabacay 1998. 1994 95 Windows 3.11 wax dhib ah malahan, waxaan u adeegsanay Windows 13 kooxo, AutoCAD R12 ee jilitaankaas daaqadaha oo aan aad u jeclayn ka hor caado-qabashada shaashadda mugdiga ah ee RXNUMX, Microstation SE oo ku taal Clipper Ustation-ka caadiga ah ee ku shaqeeya qalab aad u sarreeya laakiin qaali ah; Software-ka bilaashka ahi wuxuu ahaa khalad nerd ah oo Internetku wuxuu ka shaqeeyey waxa loogu yeero portals sida Yahoo, Lycos, Excite iyo Altavista oo ay ahayd in laga soo galo kafateeriyada internetka ama modem ku xiran taleefanka guriga.
Si looga fogaado khatarta ah uga dhawaajiyeen oo wajiyada soo baxaysaa kubada crystal ah, jimicsiga waa in lagu saleeyaa habka xilgudashada ugu habboon ee hadda jira iyo habab aragti meesha umuuruhu mawduuca cadastral marka la eego geedi socodka, qalab, baaxadda iyo jilayaasha xiriirinaya lala dhulka
Caddaymaha 6 2014 Cadastre.
1. Xaalad dhamaystiran oo ka mid ah dhulka ay ka mid yihiin sharciga dadweynaha iyo xayiraadaha
Habkaani wuxuu u horseeday Cadastre-ka caadiga ah inuu joojiyo inuu arko qayb kaliya oo xaqiiqda ka mid ah, iyadoo lagu saleynayo caqli xumo sida diiwaangelinta qaab-dhismeedka oo keliya ama laga hor marinayo maaliyadeed. Tani waxay muujineysaa in cadastre ay xarunteeda ku saleyso "xaqiiqooyinka", oo ay la socdaan sawirka sida ay wax u jiraan dhulka, iyagoo raadinaya inay hayaan macluumaad cusub oo ku saabsan qaab dhismeedka iyo xog la'aanta. Intaa waxaa sii dheer, fikradda dhammaystirka, sidaas darteed walxaha baaxadda leh ee u dhexeeya xuduudaha guryaha, sida jidadka, sariiraha webiga, xeebaha, iwm. Waxaa loo qaabeyn karaa isla caqli ahaan sida hantida ku jirta xaqiiqda joogtada ah, iyadoo laga fogaanayo in mustaqbalka ay guryaha sii wadaan inay codsadaan dib-u-habeyn soo gala meelaha loo isticmaalo dadweynaha.
Baaxadda kale ee bayaankan ayaa ah isku xirka xogta aan hantida ahayn, ee saameysa domainka, isticmaalka, shaqeynta ama dejinta guryaha. Waxay ka turjumaysaa in kaabayaasha xogta ee goobaha oo bixiya adeegyo leh macluumaad sida meelaha la ilaaliyo, aagagga halista ah, qorshayaasha isticmaalka dhulka, iwm, ay ku jiraan xeerar si cilaaqaadka baaxada leh ee guryaha ay u muuqdaan sida saamaynta ka muuqanaysa xayeysiinta rasmiga ah ama agab xilligaas ah in sarkaalku u sameeyo shahaado ama uu siiyo shati. Heerka ISO-19152, bayaankan wuxuu fududeynayaa xiriirka dhinacyada daneynaya xaqiiqda dhulka labada labada xiriir ee soo gaabinta ah RRR (Xuquuqda, Xaddidaadaha, Mas'uuliyadaha) iyo xogtan "aan-hanti ahayn" waxaa loogu yeeraa walxo dhul xalaal ah.
Isla khadadka isku midka ah, 5ta warbixin ee kale waxaa lagu soo qaaday dukumintigaas 2014 ee 'Cadastre document' oo ay kor u qaadday FIG 1998. Tusaalaha tusaalaha ee dhinaca midig laga soo qaaday wuxuu leeyahay caqli gal ah feyl nooca maamulka ah ee Cadastre, oo leh maaraynta xogta sayidka. xaqiiqooyinka ku kala duwanaan kara hay'adaha taariikh ahaan xogtaas ka qaatay aragtiyo kala duwan, iyagoo dammaanad qaadaya wada-shaqeyn iyo madax-bannaanida sharciga ah ee caqligal u ah maaraynta xogta sayidka si loo xoojiyo mabda'a sharci ahaanta:
Lambar qaran oo gaar ah oo lagu soo saarey magaca 36,
Dabeecadaha muuqaalka ah ee ka yimaada Cadastre, astaamaha sharciga ah ee ka imanaya qaabaynta / ogeysiiska iyo digniinta habdhaqanka, astaamaha caadiga ah iyo dhinacyada xiisaha leh.
Digniinaha habraacyada lagu soo bandhigay (fayl gareeyey) geeddi-socodka hawlaha kala duwan laakiin aan helin qaraar ama ka-bax.
Digniinaha is-waafajinta, ee khilaafaadka u dhexeeya xaqiiqooyinka jirka iyo kan sharciga ah.
Hoos waxaa ku yaal natiijada nuxurka LADM, sida:
Kala saaridda habraaca ku saleysan jilayaasha oo lagu darey habka socodsiinta iyo kuwa daneynaya sababaha mudnaanta leh ee hababka la xidhiidha ama caddeyn sahlan oo hor leh oo ah muwaadin xiiseynaya helitaanka fiicnaan.
Natiijada xiriirka sharciga (oo loo yaqaan habka rasmiga ah iyo sidoo kale kuwa aan rasmiga ahayn), iyada oo suurtagal ah in la arko habka dhaqanka hore, oo u muuqda xaalado aan muuqan laakiin la arki karo.
Natiijooyinka saamaynta ciriiriga ee xaddidaadda / nooca ciqaabta.
Haddii xogtaasi ka timaaddo nidaamyada adeegga ee Cadastre, Registry, Regularization or Regime Regime Registry, qof kastaa wuu u huri karaa nafsad ahaantiisa si loo wanaajiyo sababtooda adeegga iyo muwaaddinka ama isticmaalaha nidaamku ku kalsoonaan karo in xogtan ay tahay runta ugu dambeysa. Laga soo bilaabo tabta dhabta ah ee sharciga, muuqaal la mid ah caqligalka dhabta ah ee dabiiciga ah ayaa lagu heli karaa noocyo kala duwan sida deyn, amaahda ama xiriiriyeyaasha diiwaannada kale sida Ganacsiga, Caqliga, Amniga Guuritaanka iyo si la mid ah, haddii xaqiiqda maamulka lala tashanayo, walxaha waa la arki lahaa hay'adaha sharciyeed ee dhuleed ee sidoo kale leh dhinacyada daneynaya saameynta / xaddidaadda taas oo keeneysa hantida danta. Heerka hay'adaha dowladda, xogtan oo dhameystiran waa inay muuqataa iyadoo aan la xaddidneyn, haddii siyaasadaha diiradda la saarayo waxtarka macaamil ganacsi iyo jabinta talisyada u dhexeeya hay'adaha dowladda iyo jilayaasha sida ugu dhaqsaha badan muwaadinka u matala sida nootaayo, degmo, kormeeraha magaalooyinka ama sahamiyaha. Sharaxaadda waxa ay tani u noqon karto helitaanka furan ee muwaadinku waa uun arrin hufnaan iyo siyaasado faa'iido leh, maaddaama waxa ugu sarreeya (Macluumaadka Master) ay bilaash noqon karaan, inta kalena ay ku jiraan qaab mugdi ah iyo gaari wax iibsi taasi waxay fududeyneysaa soo saarista shahaado deg deg ah oo leh xog dhameystiran.
2. Ma kala soocayo khariidadaha iyo diiwaanada
Hadalkani waa mid si muuqata u muuqda, inkasta oo loogu talagalay 1994 waxay ahayd riyo, iyada oo la tixgelinayo in isku dayga ugu caansan ee la yaqaan uu arkay CAD oo ku lifaaqan 'hyperlink' si loo dhigo diiwaanka saldhiga booska, iyo kuwa ugu xumaa ee qaab-dhismeedka meelaha aan la abuuri karin. macallimiin badan oo xiriirro badan leh, sida kuwo badan oo leh milkiileyaal badan ama milkiileyaal leh fara badan; sidaas awgeed magaca milkiilaha waa in lagu celiyo diiwaangelin badan intii ay ka muuqaneysay dhulka ... iyada oo aan la gelin faahfaahinta xaddidannada xaddidan ee qararka 16.
Shaki la'aan, bayaankan wuxuu dejiyay tilmaamo xiiso leh oo ku saabsan mawduuca geospatial ee lagu dabaqay maamulka dhulka. In kasta oo ay mudan tahay in la xusuusto in fikradda bilowga ahi ay ahayd in la tixraaco "kala-tagid aan waxba ka jirin oo u dhexeeya xogta Cadastre iyo xogta Diiwaangelinta Hantida" oo aan kaliya ahayn "khariidad - feyl cadastral".
Tani waxay sidoo kale culeys siinaysaa isdhexgalka iyo jaangoynta xogta juqraafiyeed ee ka imanaya sharciyada kale ee sida "walxaha xaduud sharciyeed" saamayn ku leh adeegsiga, domainka ama shaqaysiga guryaha; Imaanshaha caqliga caadiga ah ee keydka macluumaadka ee u soo bandhigaya adeegyada kaabayaasha xogta meelaha leh siyaasadaha iyo qawaaniinta is dhexgalka ee moodooyinka. Waxaa laga yaabaa in arrin ku guuleysatay tan ay ahayd biseylka heerarka OGC ee lagu riixay barnaamijka bilaashka ah iyo si qadarin leh u aqbalay barnaamijyada lahaanshaha.
3. Qaabaynta waxay beddeli doontaa khariidadaha cadastarada
waxqabadka wanaagsanaaday of this rumowdey ee caadiga ah ISO-19152, raadinayso fiirsaneysa halleeyo lillaahinimada iyo xiriirka (RRR) u dhexeeya fasallada noqonaya xaqiiqada jireed (dadka, muuqaalka guud ee dhulka), xaqiiqada dhabta ah qaabeeyey (unit maamulka unit da'ayeen) iyo ilaha macluumaadka lagu qoro (il).
Waxay u egtahay mid sahlan in la yiraahdo, garaafka midigna wuxuu umuuqdaa mid fudud. In kasta oo taas loo keenay ISO hirgelinta waxay ka dhigtay mid ka sii adag sidii la filayay ee baahida hore. Dadaalkii ugu horreeyay ayaa loo yeeray Qaab-hawleedka Cadastare-Domain Model (CCDM), oo markii dambe loo yaqaan 'LADM', ayaa noqotay markii ugu horeysay ee ISO ah oo lagu magacaabo 2012.
Haddiise qaar ay u maleeyaan in ISO laga yaabo inaan loo baahnayn, kuweenna aqriya Cadastre 2014 sannadahaas hore waxay og yihiin in qawaaniinta macneheedu ahaa lama huraan-walina ay sii wadaan inay caqabad yihiin-. Akhrintii ugu horreysay waxay abuurtay jahwareer ka yimid cinwaannada iyo ereyada, gaar ahaan kuwa sharci-yaqaannada ku takhasusay cilmi-baarista iyo doorbidaya inay wax weyddiiyaan halkii ay ku macnayn lahaayeen iyagoo qoraya eray bixin. Tusaale ahaan, ereyga "cadastre - cadastre" looma tixgelin inuu turjumayo maxaa yeelay duruufaha sida Holland, Cadastre waa Diiwaanka; markay u soo qaadaan heerka waxay ugu yeeraan "maamulka dhulka" oo markaa u muuqda mid soo jiidasho u leh Isbaanishka "maamulka dhulka"; Kahor inta aysan u muuqan in kaliya dusha oo kaliya ee aysan ahayn xiriirkeeda oo dhan, Aenor wuxuu ku tarjumay "Maamulka Territory", taas oo dalal badan ka tahay eray khafiif ah oo cilladaysan oo la xiriira maaraynta hay'adaha. Tusaalooyinka kale waa erayga "parcel" oo loogu talagalay Anglo-Saxons waa hanti maguurto ah laakiin marka loo eego Isbaanishka ku hadla u janjeera inuu faquuqo meelaha miyiga ah oo aan ku darin hagaajinta sida ku cad xeerarka madaniga ah.
Tani waa sida saxda ah waxa ay raadiso ISO-19152, si loo jaangooyo macnaha "domain". In kasta oo ay ka maqan tahay dukumiinti wax ku ool ah oo caddaynaya falsafadiisa oo hagaya dhaqan gelintiisa; Marka la eego in moodooyinka UML aysan sahlaneyn in laga iibiyo kuwa go'aanka gaara ee filaya natiijada ugu dambeysa ee muwaadinka.
Halkan waxaa ku habboon in la caddeeyo xidhiidhka iyo faraqa u dhexeeya LADM iyo ISO-19152.
LADM waxay ku dhalatay aragti caalami ah, oo ku saabsan dhaqanka iyo isbedelka 20 ee mustaqbalka ee Maamulka Dhulka. LADM waxay ku jirtaa habab falsafadeed.
Natiijooyinka heerarka ISO 19152 ee ka yimaada bulshada caalamka, si loo qiyaaso mabaadi'da maamulka dhulka. ISO waa istaandarka lagu dabaqayo falsafadda LADM.
Arrintan korsashada waxaa loo baahan yahay in wax la qoro, in ka badan diiradda la saaro moodooyinka UML iyo ansaxinta farsamada farsamada ee maqaalada iyo bandhigyada dhacdooyinka; Waxay noqon laheyd mid xiiso leh in dadaal xoog leh laga muujiyo natiijooyinka korsashada ee heerka howsha, nidaaminta khibradaha iyo dhaqamada wanaagsan ee fududeynaya iibinta heerka go'aan qaadayaasha. Xaaladdan oo kale, waxaa jira tusaalooyin sida Honduras, oo qaatay ku dhowaad dhammaan falsafadda LADM ee nidaamkeeda 'SURE-SINAP', iyo iyada oo aan lagu darin siyaasadda guud, xaqiiqda fudud ee ku saleysan CCDM illaa 2005 ayaa u oggolaatay sii wadida xiisaha leh inkasta oo xasilooni-darrada waddankani soo maray 15-kii sano ee la soo dhaafay; ama kiisas la mid ah Nicaragua oo iyadoon la tusin hirgelinta heerka madax-ku-darka, dhammaan mashiinka tixgelinta SIICAR wuxuu muujinayaa korsashada ku dhowaad heerka 2 u hoggaansanaanta heerka.
4. Kastamka qaababka jireed wuxuu noqon doonaa wax ka mid ah kuwii hore
Natiijo ahaan qaabeynta iyo dib-u-fekerka qaababka jireed, soo-jeedinnada ayaa soo baxa oo saameynaya dhinacyada sida magac-u-dhigga cadastral. Waqtiyadi hore, furayaasha cadastral waxay ahaayeen taxane ilaa 30 lambar ah, halkaas oo aqoonsiyo juqraafiyeed iyo astaamaha maamul isku dhafan yihiin; iyadoo jacayl u ahayd dadka isticmaala machadka dhexdiisa, isticmaalaha ugu dambeeya waxay ahaayeen kuwo culeys badan oo aan waxtar lahayn haddii lambarradaas badankood eber yihiin. Tusaale ahaan, magacyadan magacyadooda waxaa ka mid ahaa in guryuhu miyi yahay iyo in kale; haddii tani u dhacday in loo tixgeliyo magaalo ahaan aqoonsigeedu waa la beddelay sababtoo ah tirada isku dhafan may ahayn isku mid. Inta badan caqligaasi wuxuu ka yimid maareynta qaababka muuqaalka ah, iyadoo aan xusuusan nahay in markii hore fikirka magaalooyinka iyo miyiga lala xiriiriyay cabirka daabacaadda ee khariidadaha ugu dambeeya, taas oo loogu talagalay meelaha dadku ku badan yahay looga baahan yahay miisaanka 1: 1,000 halka miyiga miisaanka 1: 5,000 ama 1: 10,000.
Ka fikirida qaababka dhijitaalka ah waxay horseed u tahay jabinta qorshayaashan, ka fikirida waxa ku kordhinaya qiimaha muwaaddinka u baahan lambar fudud iyo qaabeynta halka ay tahay inay hantidu sii waddo inay ilaaliso aqoonsigeeda in kasta oo degmada la beddelayo sababo la xiriira dib-u-habeyn lagu sameeyo xadka u dhexeeya degmooyinka, inkasta oo bedesho xaaladdeeda rasmiga ah ee rasmiga ah, in kasta oo la beddelayo astaamaha magaalooyinka-miyiga. Maaha in goobahan aan loo baahnayn, laakiin haddii ay ku jiraan miisas sifooyin ah, waa la beddeli karaa wakhti kasta iyada oo aan shayga beddelin aqoonsigiisa; Ilaa iyo, dabcan, isbeddelku wuxuu muujinayaa wax ka beddelka joomatari ahaan.
Sidoo kale tan waxaa ku soo kordha habab aqoonsi oo wax ku ool ah, sida kuwa loo isticmaalo nidaamyada sida baasaboorrada, habraacyada, taarikada gawaarida (tusaale ahaan). Lambarka 30-ka lambar wuxuu noqon doonaa jacayl; waxaan halkaas ku lahaan karnay midabka gaariga, tirada albaabada uu leeyahay, tirada giraangiraha, sumadda iyo xitaa suuragalnimada xitaa inta jeer ee milkiilaheeda uu galmo ugu sameeyay kursiga dambe; laakiin saxanku wuu yaryahay oo dhowr lambar ayaa ku jira; booliska taraafikada ayaa xusuus xun wuxuuna ku mashquulsan yahay xusuusashada lambarka si fudud xitaa haddii gaariga uu xawaare ku socdo; ka dibna waa inuu noqdaa mid aan la beddeli karin waqtiga illaa inta ay isku gaari yihiin. Halkaas waxaa ka soo baxa habab u rogi kara lambar ku saleysan 10 lambar lambar ah (saldhig 10) una badal koodh isku darka tobankaas lambar iyo 26 xaraf ee xarfaha ah (saldhig 36);
Tusaalaha saldhig 10 ilaa salka 36 beddelaad waa: 0311000226 macnaheedu waa 555TB6. Waxay ka dhigan tahay in kaliya 6 lambar ay taageeri karto ilaa toban bilyan oo dhisme oo gaar ah, iyadoo la ilaalinayo isla cabirka (6 lambar). Maaddaama otomaatiggu ay suurtagal tahay in lagu sameeyo beddelaadkan iyo xiriir ka dhan ah lambarradii hore; muwaadinku, koodhku waa xarig gaaban, gudaha leh astaamaha koodhku waa la qarin karaa ama si fudud ayaa lambar isku xigxigta heer qaran ah. Si loo tijaabiyo sida tani u shaqeyso, waxaan soo jeedinayaa iskuxirka google.
5. Shaqada wadajirka ah ee shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha
Isbeddelkani wuxuu saameyn weyn ku yeeshay moodellada iskaashiga dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay, iyagoo doonaya in loo wareejiyo waaxda gaarka loo leeyahay dhinacyadaas oo aan u ahayn ganacsi waara hay'adda dawladda. Sannado kale, Cadastre wuxuu sameeyay sahamin dhammaystiran oo ku saabsan berrinka, oo ay la socdaan guuto dad ah oo ay shaqaaleysiisay hay'adda; maanta aad ayey u fududahay in loo dhiibo howlgalkaas. Sidoo kale, dijitaalka iyo soo saarista xogta laga helo diiwaanka jirka, taasoo u oggolaaneysa shirkadaha gaarka loo leeyahay inay qabtaan shaqooyinkaas "ku meelgaarka ah" ama ugu yaraan haddii si wanaagsan loo fuliyo, waxaa la sameeyaa hal mar oo keliya, iyadoo laga fogaanayo maalgashiga qalabka gaboobay. cimilada.
Si kastaba ha noqotee, waa caqabad taas oo ay jiraan waxyaabo badan oo lagu qaabeynayo si tartiib tartiib ah iyo halista. U wareejinta xafiiska hore ee bangiga waxay umuuqataa mid aad ufudud una dhow qasab, laakiin dhiibida rasiidka macluumaadka waxay ubaahantahay noocyo kale oo dammaanad qaad ah, kaliya maahan xaga amaanka laakiin sidoo kale masuuliyada sharciga iyo maamulka.
6. Maalgashiga Cadastre waa la soo kaban doonaa
Maqaalka ma bixinayo wax intaa ka badan, waxaana rajeyneynaa inaan ku taabano daabacaad mustaqbalka ah. Laakiin asal ahaan mabda'aani wuxuu ku saleysan yahay xaqiiqda ah in qabashada macluumaadka, ka guuritaanka jirka ama dhijitaalka ama dhismaha nidaam ballaaran la sameeyo hal mar. Oo si wanaagsan baa loo qabtay. Hawlgalka cusbooneysiinta ee soo socda iyo isbeddelkiisu waa inuusan u baahnayn amaah ururada caalamiga ah, laakiin waa inuu ku jiraa shaxda dib-u-maalgashiga ilaha laga soo saaray hal-abuurka ee wax soo saarka iyo adeegyada cusub.
Baaqyada 2034 Diiwaangelinta Diiwaangelinta Dhulka
2014 qiimeyn ayaa laga sameeyey sida safarka u ahaa, horumarka iyo natiijooyinka cusub ee la tixgelinayo waxa ka iman doona sanadaha soo socda ee 20.
Dib-u-eegiddan, waxaan tixgelineynaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee saameynaya isbeddelka macluumaadka ee cadawga, sida saldhigyada xogta jaangooyooyinka iyo kaabayaasha, qulqul-darrada bulshada ee bulshada; Sidaa oo kale, aragtiyihii hore u soo jeediyay Cadastre oo ah Maamul Goboleed, Maamul goboleed iyo waxa laga filan karo mustaqbalka iyadoo la fududeynayo fududeynta.
Sidaa awgeed 6 qoraal oo cusub iyo 6 su'aalood ayaa soo baxaya. Sida Cadastre 2014, waa fasiraad ku saleysan macnaha guud ee waxa hadda socda. Wadamada qaarkood ee ka gudbay nusqaamaha aasaasiga ah waxay qaadan doonaan qaar ka mid ah isbeddelladan, maxaa yeelay xasilloonidooda iyo dalabkooda ayaa durba dalbaya wax ka badan suuqooda; Tani waxay u iftiimin doontaa dadka kale ee naftooda badbaadin kara toobiye caadi ah. Kuwa kale, oo leh baahiyo aasaasi ah, waxay isku dayi doonaan inay buuxiyaan deynta bayaannada Diiwaangelinta Dhulka ee 2014.
1. Mensura qiyaas ahaan
Mawduucu waa mid da 'wayn, Borges waxay ka soo ururisaa ilaha taariikhda ka timid 1658:
Boqortooyadaas, farshaxanka sawir qaadashadu waxay gaareen sida quruxda leh ee khariidada gobolka kaliya ee ku yaal magaalada oo idil, iyo khariidada Boqortooyada, oo ah gobolka oo dhan. Waqtigaas ka dib, Khariidadahaan aan caqli-gal ahayn ma aysan qancin, iyo Koolejiyadaha Karti-galiyeyaasha waxay sare u qaadeen Khariidadda Boqortooyada, taas oo ahayd xajmiga Boqortooyada, oo si aan toos ahayn u midoobin.
In ka yar caadaysatay Study of Cartography, ka dib markii Generations fahamsan yahay in this la'egayah Map ahaa aan waxtar lahayn oo aan adaygeen isaga siiyey ogooda Sun iyo Winters. Dhulka lamadegaanka waxaa ku jira burburin Khariidado Khariidad ah, oo ay deggan yihiin Xayawaanka iyo Akhriska; dalka oo idil ma jiro wax kale oo ku saabsan jajabnaanta juqraafi.
Had iyo jeer waxay ahayd walaac, gaar ahaan macnaha guud ee la ilaaway in haysashada dhulka oo dhan oo leh astaamo sax ah oo la kontoroolo ay ka muhiimsan tahay haysashada kaliya hal gabal oo leh saxnaan aad u sarreeya Iyadoo la adeegsanayo fursadaha tikniyoolajiyadda ee hadda jira, bayaankan wuxuu sheegayaa in mowduucani dan guud laga yeelan doono 20-ka sano ee soo socota; qaasatan halka caafimadka dhulka horay loo dhaafiyay danta kaliyana ay tahay in la hagaajiyo saxnaantiisa.
2. Mabaadi'da Hanuuninta Xuquuqda, Xannibaadda iyo Waajibaadka
Tani waa isbeddel ku yimid wixii horay loogu soo bandhigay Cadastre 2014, oo leh kala duwanaansho halkii aad ka ahaan lahayd oo keliya cilaaqaadyada u dhexeeya walxaha dhulka ee guryaha ku yaal, waxay noqon karaan walxo leh moodooyinkooda dheereeya. Tusaale ka hor waqtiga waa Diiwaanka Nidaamka Gaarka ah ee waddamada qaarkood horey u haysteen; Waxaan ku adkeysanayaa, ka baxsan ahaanshaha xiriirka u dhexeeya lakabyada, waxay u horseedaysaa adeegsiga farsamooyinka diiwaangelinta walxahaas oo damaanad qaadaya taariikhdooda, sharci ahaantooda, salaadda kooxda xiiseyneysa iyo dabeecadda waqtiga isticmaalka qiimeynta.
Sidaas daraaddeed degtey koorta ah u dhowaan pass garoonka diyaaradaha qaabeeyey waxa ay tahay; meel ka badan sharciga dadweynaha, laakiin farqiga in overlaps guryaha badan oo sharci gaar ah, waxa ay leedahay taariikh in waa sharciga ku saabsan in la dhisay milkiilaha waa kan hay'adda maamusha taariikhda ku ool ah oo ay joometiriyada duleedka ( D) oo waxa keliya oo la bedeli karaa by macaamil ganacsi ah.
3. Awoodda lagu maamulayo 3D
Tani way ka badan tahay wax iska cad. Illaa iyo hadda saddex-geesoodka ayaa wakiil ka ahaa, inta badanna tiro-xaraf ahaan. Waa suurtagal in la tago guri dabaq ah oo ku yaal dhisme jiifa iyadoo la ogyahay lambarkiisa hantida, heerka dhismaha dhismaha, nambarka munaaradda, heerka iyo lambarka guriga.
Isbeddelka Mataanaha Dijital ah iyo SmartCities wuxuu horseed u yahay qaabab saddex-geesood ah oo qaab-hawleed ah oo ku saabsan howlaha software-ka loogu talagalay maareynta hantida (Indoors Cadastre). Hagaag, ka sokow matalaadaas, Cadastre 2034 wuxuu leeyahay waa la maamuli karaa; waxaa loola jeedaa, adeegso farsamooyinka diiwaangelinta si cusbooneysiintoodu aysan u taaban oo keliya u tirtirin, laakiin ay ula xiriiraan macaamil wareegga nolosha; way dhasheen, joomatari ahaan waa la qabtay, waa la naqshadeeyay, waxay la shaqeeyaan hawlgallada maalinlaha ah ee aadanaha, isbeddello ayaa ku dhaca, xitaa way dhintaan.
Tani waxay ku lug yeelan doontaa awoodda maamul ansaxinta 3D mid ah hababka cusub ee qabashada macluumaadka, kabaallaynta farsamooyinka hadda jira sida daruur oo kale dhibic balse la muuqaalada si ay u caawiyaan aqoonsado alaabta nadaam kaabayaasha fududeeyay oo lagu daydo dhul digital.
4. Cusbooneysiinta waqtiga dhabta ah
Ilaa iyo inta jilayaasha ku lugta leh maamulka dhulka lagu dhex milmay milkiilaha guryaha, qulqulka isku xigxiga ee isbarbar dhigi kara wuxuu noqon doonaa mid aan loo baahnayn. Tusaale ahaan, bangigu waa inuu awoodaa inuu galo amaahda oo aan lahayn nootaayo ahaan dhexdhexaadiye; Isku soo wada duuboo, isagu waa adeegsi awood la siiyay kahor nidaamka waana kan qandaraaska la galay muwaaddinka, kaasoo u oggolaanaya deynta hantidiisa. Ilaa hadda, dowlad duug ah ayaa awoodi doonta inay dhigto diiwaan-haye gujinaya batoon gudaha aqbalida diiwaangelinta, ilaa uu ka caajinayo weydiisashada rukhsadaha maxaa yeelay fartiisa ayaa xanuunaysa, waddada ayey saari doonaan oo waxay u igmanayaan waxqabadka isaga hay'ad idman oo ku taal bangiga. Isla caqligaas ayaa lagu dabaqi karaa jilayaasha kale ee hada soo fara galiyay macaamil ganacsi, sida ilaaliyaha magaalooyinka, sahanka, nootaayo, degmada, iwm. Ilaa iyo inta jilayaashu isku dhafan yihiin, cusbooneysiintu waxay noqon doontaa waqtiga dhabta ah tartankuna wuxuu noqon doonaa adeegyada ugu fiican.
Ka dibna, cadawga waxaa lagu casriyeyn doonaa dadka, marka ay mowqifka ka dhigtaan.
Tani waxay u egtahay xoogaa fog, laakiin durba waa kiiska bangiyada. Markii hore, bangigu wuxuu soo saaray kaar (ha, sida kaararka tikidhada safarka), waxayna ahayd lagama maarmaan in la aado bangiga si aan lacag ula soo baxno, ka dibna aan ugu iibsado lacagtaas, haddii aan siyaadnona waxaan tagi karnaa bangiga ama qasacadda caano sariirta hoosteeda. Maanta waxaad furaysaa xisaab bangi, waxayna ku siinayaan kaarka bangiga iyo lambarka sirta ah ee aad ku maamusho internetka; Mar dambe kama bixi doontid bangiga, laakiin waxaad ka bixi doontaa ATM; koontadaada waa la cusbooneysiiyaa waqtiga dhabta ah marka aad wax ka iibsaneyso ganacsi kasta, khadka tooska ah ama aad ugu wareejineyso dhinacyada saddexaad moobiilkaaga inta aad taksiga ku jirto.
Isbeddelku wuxuu tilmaamayaa halkaas, in isticmaalaha uu galayo akoonkiisa Diiwaanka Hantida Qaranka, oo uu halkaas ku arko guryaha uu leeyahay, haddii uu doonayo inuu wax amaahdo wuxuu si toos ah ula sameyn karaa bangiga, haddii uu doonayo inuu iibiyo wuu toos u samayn karaa, haddii uu doonayo inuu maamulo a ruqsad dhisme ama ruqsad shaqo ... sida horeyba uga dhacday bangiga! "Sida Uber oo kale", tan ma joojin karaan mas'uuliyiinta diiwaangelinta cadastre, xitaa xitaa ururada nootaayooyinka. Si fudud baahida suuqa; ilaa iyo inta howlaha la dejinayo, amniga iyo dhammaystirka macluumaadka ayaa la xoojinayaa; moodooyinka ganacsiga qaska ah ayaa lagu dari doonaa xalalka ku saleysan muwaadinimada mudnaanta koowaad.
Marka tan la eegayo, geedi socodka in hadda laga yaabaa in si gaar ah u shaqeeyaan isugu sida suuqa hantida (kirada iyo iibka) halkaas oo B2B sida nidaamyada AirBnb waxaa dilay model ah caadiga ah la gaari is-abaabulay caalami ah by user dhamaadka; dhimashada wadada ah wakiilada guryaha, qareenka sameeya qandaraaska, qiimeeye kaas oo ka dhigaya daraasadda dhaqaalaha, shirkadda oo damaanad qaadaysa caymiska iyo in ka badan gobolka oo dhan kharashka canshuurta.
Waxay sidoo kale dhici doontaa in nidaamyada diiwaangelinta hantida la mideyn doono, diiwaanka "alaabada la heli karo in la suuq geeyo", tani waxay khuseysaa xaaladaha sida hantida la dhaqaajin karo (gawaarida), badeecadaha caqliga, badeecadaha ganacsiga (shirkadaha, saamiyada), iyada oo u dhiganta " dammaanadaha la suuq geyn karo '. Tan awgeed, tiknoolajiyada sida BlockChain iyo sirdoonka macmal qaadan doonaa faa'iidaystaan ​​heshiisyo caaqil ee macquulka ah ee wax mataano ah mid dhab ah digital jirka ay u dhigma ee cryptocurrency, ilaa xad in securitization waa la hubaa in diiwaanka ay dawladdu ma sii dhoofo.
Ka dibna, diiwaanka-caddaynta ayaa la cusbooneysiin doonaa waqtiga dhabta ah sida horeyba uga dhacdo jawi kale ee nolol maalmeedka.
Sidoo kale waa arrin "bini-aadamnimada degdegga ah in Diiwaangelinta Diiwaangelinta Cadastral ay daboosho baahi weyn oo adduunka ka jirta." Taasi waa sababta ay su'aashu tahay: Diyaargarowga Caalamiga ee Cadastre diyaar ma u yahay inuu la kulmo kharash, waqti iyo raad raadin baahida loo qabo boqolkiiba 70% dadweynaha ka maqan xuquuqda lahaanshaha? Una jeedin mayno sameynta ictiraafka dhulka 50 sano gudahood, laakiin ugu badnaan waqtiyada diiwaangelinta ee 6 sano; in kasta oo tan loo baahan yahay inaynu jabinno tusaalayaasha socodka hadda socda ee hannaanka diiwaangelinta, iyadoo diiradda la saarayo waxa qiimaha ku kordhinaya silsiladda Maamulka Dhulka.
Waxaan tixraaceynaa, sidaa darteed, dhinacan laxiriira bayaankan ayaa ah baahida caalamiga ah ee diiwaan galinta dadka aan heysan aqoonsi lagu aqoonsaday nidaam rasmi ah, guryaha aan diiwaan gashaneyn iyo liiska xuquuqda ay leeyihiin dadkaan. dhulkan. Tan, ma aha in la sheego in wixii horeyba loo diiwaangeliyey ay ku jiraan xog-ogaalnimo waqtigeedu dhammaaday. Helitaanka xallinta dhibaatadan 20-ka sano ee soo socota waxay muujineysaa dib-u-fikiridda hababka khalkhal gelinta ee u oggolaanaya yaraynta waqtiga, kharashyada iyo ka-qaybgalka ballaaran ee dadweynaha.
5. Kalluumaysiga caalamiga ah iyo kan la shaqeeya
Taas kaliya. Jaangooyo suuqeed dhiirigelin leh, oo leh aqoonsi shay oo caalami ah. Qashinka qashin qubka ayaa 30-ka lambar ee koodhka ah ee isbadala markasta oo ay hantida buuuruhu ka buuxsamaan.
6. Awoodda lagu maareeyo xuduudaha xayawaanka
Tani waxay muujinaysaa khariidadda walxaha aan la taaban karin, sida kaydka dabeecadda ee xiisaha uu yahay caalamku, kaydka maraakiibta badda.
Su'aalaha doorka mustaqbalka ee mustaqbalka ee Cadastre
Cadastre 2034, dhibaatooyinka caalamiga ah ee xiisaha leh ayaa sidoo kale la soo qaaday, taas oo noqon karta in Cadastre ay soo dhex gasho, iyo haddii ay sidaas tahay, waxay calaamadeyn doontaa qaabab cusub oo loogu talagalay maareynta xarumaha macluumaadka guud ee jawiga adduunka ee sii kordhaya. Su’aalahaasi waa:
1. Cabbitaanka dhulka Miyuu Cadastre doorka door ka ciyaari karaa diiwaangelinta macluumaadkaan?
2. Ammaanka Cuntada Miyuu xiiso u yeelanayaa in uu xiriir la yeesho shayga dhulkiisa dabeecaddiisa iyo xidhiidhka aadanaha ee isticmaalka, helitaanka iyo helitaanka xaq u lahaanshaha cuntada?
3. Isbedelka cimilada Ma jiri doontaa xiiseyn ku saabsan diiwaangelinta xuquuqda ah ee ku tiirsanaanta nugul ee la xidhiidha isbedelka cimilada?
4. Caddad Cadastre. Maxaa lagu qaban karaa laguna qaban karin cadastre iskaashi?
5. Green cadastre. Sharciga xadka cagaaran?
6. Global cadastre. Kaabayaal noocee ah ayaa lagama maarmaan u noqon doona Cadastre caalami ah?
Fitast-ujeedo-cadastre waa sida Uber. Joometer-ku waa inuu ku lug yeesho, maxaa yeelay waxay ku dhici doontaa innaga ama la'aanteed.
Post Previous" Hore System Camera codsanay-Streetview
Post Next ArcGIS - Buugga SawirkaNext »